टिकट काट्न नसक्नेहरू खाडीमै अलपत्र- समाचार - कान्तिपुर समाचार
टिकट काट्न नसक्नेहरू खाडीमै अलपत्र
कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फिर्तीको पर्खाइमा रहेका खाडीका नेपाली कामदार भन्छन्– आफैं टिकट किन्न सक्ने वा कम्पनीले टिकट जुटाइदिएकाहरु मात्र अहिले नेपाल जान पाइरहेका छन् । खल्तीमा पैसा नहुने र नेपालबाट मगाउन सक्ने अवस्था नभएकाहरु फर्कनेको सूचीमा पर्नसमेत सकेका छैनन् ।
असार १२, २०७७ होम कार्की
काठमाडौँ — खाडी मुलुकबाट स्वेदश फर्कन जसले जहाज टिकट जुटाउन सके, उनीहरु स्वदेश फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसिसकेका छन् । जसले टिकट जोहो गर्न सकेका छैनन्, उनीहरु मरुभूमिमै तड्पिइरहेका छन् । तीमध्येका हुन्, कुवेतको सवाअसालिमस्थित ब्लक नम्बर ३ मा बसेका झापा सुरुङ्गाका उमेश सोती । उनी स्वदेश फर्कने दिन कुरिरहेका छन् ।
इन्फोग्राफिक्स : रामकृष्ण श्रेष्ठ
उनीसहित ६ नेपाली र एक भारतीय एउटै कोठामा बस्छन् । बाहिरी तापक्रम ४५ डिग्री नाघेको र कोठामा एसी बिग्रिएकाले बस्नै नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘ज्यान त अन्डा उसिनेजस्तै गुम्सिएको छ, अरूको कोठामा जाने अवस्था छैन, कोठाबाहिर तातो बाफ आउँछ, हपहपी हुन्छ,’ उनले टेलिफोनमा कान्तिपुुरसँग भने, ‘कुवेतमा यस्तो गर्मी छ, हामीलाई सास फेर्नै गाह्रो भइसकेको छ ।’ एसी बनाइदिन दूतावासमार्फत भन्दासमेत कम्पनीले नमानेको उनले बताए ।
उनी काम गर्ने स्पा कम्पनीमा चैत १ देखि ड्युटी बन्द छ । तलब दिएको छैन । सरकारी राहतबाट उनले जसोतसो दैनिक छाक टारिरहेका छन् । यो कम्पनीले २६ ठाउँमा स्पा चलाउँथ्यो । ६ सय जना कामदार थिए । कोरोना महामारीलाई रोक्न कुवेत सरकारले कफ्र्यु लगाएपछि काम बन्द छ । केही खुकुलो भए पनि अब कम्पनी कहिलेसम्म बन्द हुन्छ र कहिले खुलेर काम गर्न पाइन्छ भन्ने यकिन छैन । खुलेपछि काममा फर्किने गरी नेपाल जान कम्पनीले उनीहरुलाई हातहातमा राहदानी थमाइसकेको छ ।
उनीहरु कुवेत पुगेको २० महिना भयो । अबको दुई महिनापछि करारपत्र समाप्त हुँदै छ । फर्किने बेला फिर्ती टिकट कम्पनीकै जिम्मेवारीमा पर्छ । ‘कम्पनीको जिम्मेवारी मात्रै भनेर हुन्न रहेछ, दिनु पनि पर्दो रहेछ । उल्टो कम्पनीले अनेक कागजमा सबै लिइसकेको भनेर हस्ताक्षर गर्न लगायो, नत्र घर जान नदिने भन्यो,’ उनले भने, ‘हामीभन्दा अगाडि ७० जना इन्डोनेसियाली र ३० जना भियतनामी त्यसरी नै गए । अब हामीले टिकट पाउने आशा मारिसकेका छौं । हामीले १२ मार्चसम्म काम गरेको तलब पनि पाएका छैनौं । दूतावासमा भन्दा अहिले अप्ठ्यारोमा छांै, केही भन्न मिल्दैन । जस्तो दिएको छ, त्यस्तै खाएर बस, हल्ला नगर भन्ने आदेश आउँछ ।’
कुवेतकै डल्फिन आयल एन्ड ग्यास सर्भिस कम्पनीबाट राहदानी नपाउँदा हेटौंडाका माधवप्रसाद पुडासैनी स्वदेश फिर्न पाएका छैनन् । उनले श्रीमतीको अप्रेसन गर्नुपर्ने अवस्था दर्साउँदै गत फागुन १७ गते कामबाट बिदा लिएका थिए । ‘मलाई मरुभूमिमा तेल खोज्ने चाइनिज कम्पनीमा खटाइएको थियो । दुई महिनाअगाडि नै पूर्वसूचना दिएर स्वदेश फिर्न खोजेको थिएँ । कम्पनीले ड्युटी सकेको ५ दिन बित्दा पनि पठाएन । दूतावास गएँ । दूतावासले फोन गरेपछि कम्पनी झन रिसायो । दूतावासबाटै ट्राभल डकुमेन्ट लिएर जाऊ भन्दै कम्पनीबाट धक्का मारिदियो । ५ महिनादेखि तलबविहीन भएर साथीहरुको शरणमा छु । स्वदेश जानेको सूचीमा छु । टिकट काट्ने पैसा र राहदानी छैन,’ उनले भने, ‘दूतावासले न त राहदानी निकालिदिन सक्यो । न मलाई पठाइदिन सक्यो ।’
कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले दुईवटा चार्टर उडानबाट ३ सय ४ जनालाई स्वदेश पठाएको छ । कुवेत सरकारले आफ्नै खर्चमा १० उडानमार्फत आममाफी पाएकामध्ये १ हजार ८ सय ६९ जनालाई पठाइसकेको छ ।
खाडीमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारले आफैं टिकट खरिद गर्न सक्ने र कम्पनीले टिकट उपलब्ध गराउनेलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको भन्दै दु:ख व्यक्त गर्न थालेका छन् । ‘जोसँग पैसा छ, आर्थिक अवस्था राम्रो छ । जसले घरबाट पैसा मगाएर जान सक्छन् । उनीहरु नेपाल जान पाइरहेका छन् । रोजगारी गुमाएको तीन महिना भइसक्यो । कतैबाट टिकट जुटाउन सकिएको छैन । हाम्रो त नाम पनि निस्केको छैन,’ यूएईमा कार्यरत सविन क्षेत्रीले भने, ‘खल्तीमा भएको केही पैसा पनि सकियो । क्याम्पबाट विमानस्थलसम्म जाने भाडा त के, साँझ बिहान खाने खर्च पनि छैन ।’ यूएईमा मात्रै दूतावासले स्वदेश फिर्ने ४ हजार १ सय १० जनाको नामावली प्रकाशन गरिसकेको छ । यूएईबाट १२ उडान भइसकेको छ ।
कतारबाट स्वदेश फिर्न चाहने झन्डै ५ हजार जनाको नामावली प्रकाशन भइसकेको छ । कतारमा रहेका सुदीप भण्डारीलाई दूतावासको छनोटप्रति चित्त बुझेको छैन । ‘दूतावासले केको आधारमा नामावली निकालिरहेको छ ? म र मेरो साथी एउटै कम्पनीमा काम गर्ने हो । एउटै समस्या हो । रोजगारी पनि एकै दिन गएको हो,’ भण्डारीले भने, ‘साथी जेठ १० गते नै उडान भएर गइसक्यो । मेरो नाम नै निस्केको छैन ।’
कतारमा रहेका रामबाबु महतो स्वदेश फिर्न नपाउँदा निकै मानसिक तनाव देखिन थालेको बताए । ‘रोजगारी गुमेको चार महिना भयो । अब यहाँ बसेर खाना खायो टिकट काट्ने पैसा हुँदैन । टिकट काट्ने पैसा राख्यो यहाँ अहिले के खाने,’ उनले भने, ‘अब पागल भयो भने सबै जिम्मेवारी सरकारले व्यहोर्नुपर्छ ।’
कोभिड संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) ले टिकटको प्रबन्ध गर्न नसक्नेलाई ल्याउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतलले पनि कामदारको कल्याणकारी कोषको सन्तुलन नबिग्रिने गरी उद्धार प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिइसकेको छ । असार १ गते सर्वोच्चले ‘...योगदानकर्ता (कोषमा योगदान गर्ने) का वैधानिक अपेक्षा र कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्नु’ भन्दै आदेश दिएको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवले अदालतको निर्णय, कानुनी अवस्था र व्यावहारिक पक्षलाई हेरेर विदेशबाट आउने नेपालीको टिकट खर्च व्यहोर्ने गरी कार्यविधि बनिरहेको बताए ।
श्रमले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करार अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिमध्ये पनि रोजगारीको प्रकृति, आयश्रोतसमेतका कारण आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्था भई अलपत्रमा परेकालाई मात्रै टिकट दिने गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । ‘विदेशबाट आउने सबैले टिकट पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । सबैको आर्थिक हैसियत र रोजगारको अवधि पनि हेरिन्छ ।’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कसैले जिम्मेवारी नलिएकाहरु भने पर्न सक्छन् ।’
‘अहिलेको परिवेशमा जो घर जान चाहन्छन्, उसलाई नि:शुल्क घर पुर्‍याउने व्यवस्था सबैभन्दा ठूलो हो । त्यसपछिका साना कुराहरु त कति छन् कति । पैसा हुने र पैसा नहुनेले घरसम्म जान पाओस् । जान नमिल्नेहरुले यहाँ राहत पाओस्,’ सोतीले भने, ‘सरकारसँग सबैको अपेक्षा यही हो ।’
प्रकाशित : असार १२, २०७७ ०६:३६
कोरोनाविरुद्ध अर्को खोप मानवमा परीक्षण सुरु
खोप दिइएका स्वयंसेवकमा अपेक्षित नतिजा देखिएपछि परीक्षणका लागि थप तीन सय जनालाई खोप दिइने
असार १२, २०७७ नवीन पोखरेल
लन्डन — बेलायतका अनुसन्धानकर्मीहरूले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध अर्को खोपको मानवमा परीक्षण सुरु गरेका छन् । इम्पेरियल कलेज लन्डनले विकास गरिरहेको भाइरसविरुद्धको खोप पहिलो पटक परीक्षणका लागि एक स्वयंसेवकलाई दिइएको हो ।
वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने ३९ वर्षीया स्वयंसेवकलाई एक सातापहिले खोप दिइएको थियो । उनी स्वस्थ रहेका र नतिजा अपेक्षित देखिएको बताइएको छ ।
आगामी दिनमा परीक्षणका लागि अन्य तीन सय जनालाई उक्त खोप लगाइने अनुसन्धानकर्मीहरूको भनाइ छ । परीक्षणको नेतृत्व कलेजका प्राध्यापक रोबिन स्याटकले गरेका छन् ।
पहिलो चरणको परीक्षणपश्चात् आगामी अक्टोबरमा अर्को चरणको परीक्षण गरिने जनाइएको छ । उक्त परीक्षणमा ६ हजार जना सहभागी हुनेछन् । कलेजले उक्त खोप सन् २०२१ को आरम्भसम्ममा बेलायतलगायत अन्य मुलुकमा वितरण सुरु हुने आशा व्यक्त गरेको छ ।
जनावरमा परीक्षण गरिँदा उक्त खोप सुरक्षित र प्रतिरक्षा प्रणाली सबल बनाउन प्रभावकारी देखिएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन् । यसअघि बेलायतकै अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले गत अप्रिल २३ मा सुरु गरेको पहिलो चरणको परीक्षणमा करिब १ हजार जनालाई दिइएको थियो ।
विश्वविद्यालयले दोस्रो चरणको परीक्षणका लागि बेलायतका १० हजार २ सय ६० जना स्वास्थ्य स्वयंसेवकलाई आह्वान गरिसकेको छ । उनीहरूलाई खोप दिने काम भइरहेको जनाइएको छ । अक्सफोर्डका अनुसार दोस्रो र तेस्रो चरणको परीक्षणमा ५५ वर्षमाथिका वयस्क र ५ देखि १२ वर्षसम्मका बालबालिकालाई सहभागी गराइनेछ ।
बेलायत सरकारले अक्सफोर्ड र इम्पेरियल कलेजमा अहिले जारी परीक्षणलाई सघाउन थप ८ करोड ४० लाख पाउन्ड उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले यसअघि नै ४० मिलियन पाउन्ड खोप विकासका लागि उपलब्ध गराएको थियो ।
बीबीसीका अनुसार अहिले विश्वभरि कोरोना भाइरसविरुद्ध झन्डै १ सय २० वटा खोप विकास भइरहेका छन् । बर्नमाउथ विश्वविद्यालयमा आबद्ध जनस्वास्थ्यविद् डा. निर्मल अर्याल खोपको मानवमा परीक्षण सुरु हुनुलाई सकारात्मक लिन्छन् ।
बेलायत सरकारले समेत आर्थिक सहयोग दिएकाले खोप निर्माणमा सोचेभन्दा छिटो सफलता मिल्ने उनको विश्वास छ । ‘हामीले कोरोना रोगलाई हेरेर मात्र पनि हुँदैन । नयाँ खोपले मानिसको प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउला तर अरू अंग मुटु, कलेजो, दिमाग वा अन्यमा असर गर्‍यो भने त्यो काम लाग्दैन,’ अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसकारण अहिले नै हतार गर्नुभन्दा अन्तिम नतिजा नै कुर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
प्रकाशित : असार १२, २०७७ ०६:१७
एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलद्वारा ओली पक्षधर ७ जना सांसदलाई निलम्बन गर्ने निर्णय
मन्त्रीलाई प्रतिपक्षको कुर्सी !
बीपी प्रतिष्ठानमा अनियमितता : अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराउँदा डाक्टरलाई कारबाहीको पत्र
नेपाल निवासमा देउवा र दाहाल
श्रीमतीकै योजनामा माओवादी नेता पाण्डेको हत्या : प्रहरी
गण्डकी प्रदेश सांसद थापाको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेश सर्वोच्चद्वारा खारेज
Daily Essentials on Daraz
Big Choice Premium Jeera Masino Rice
Shop groceries on dmart
Good Knight Advanced Active Plus Machine
Mirinda 2.25L (Pack of 4)
नेपालको विकासका ‘फल्ट लाइन्स’
अंगराज तिमिल्सिना जेष्ठ ३१, २०७८
नयाँ बजेटको ‘खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ’ भन्ने निर्णय विवादमा पर्‍यो । आवश्यक अध्ययन र गृहकार्य, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं...
अगाडि जाने कि पछाडि फर्कने ?
केशव दाहाल जेष्ठ ३१, २०७८
अगाडि जाने कि पछाडि फर्कने ? नेपाली राजनीति कहिलेकाहीँ अनौठा प्रश्नहरूसँग ठोक्किन आइपुग्छ । यो त्यस्तै अनौठो र अनावश्यक प्रश्न हो । तर लोकतन्त्रमा राम्रा र नराम्रा सबै...
राष्ट्रपतीय भूमिका : वफादार हैन आलंकारिक
मीना पौडेल जेष्ठ ३१, २०७८
मुलुकका लागि थोरबहुत पसिना खर्चेको भएर होला, यहाँको प्रजातान्त्रिक परिपाटी सर्वसाधारणको जीवनसँग जोडियोस् र समानताका लामा प्रयासहरूलेमूर्तरूप लिऊन् भन्ने आकांक्षा आफू जहाँ कार्यरत रहे पनि...
सम्पादकीय जेष्ठ ३१, २०७८
राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति जुनसुकै सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनु महत्त्वपूर्ण भए पनि संसदीय लोकतन्त्रमा दलीय अंकशक्तिको फेरबदलबमोजिम सरकार बन्नु, ढल्नु र फेरिनु सामान्य परिघटना...
चरम विभेदकारी विश्व र ‘जी–सेभेन’
अच्युत वाग्ले जेष्ठ ३०, २०७८
विश्वमा चरम आर्थिक असमानता र विभेद विद्यमान छ । यो बढ्दो छ । यो भनाइ अक्सर दोहोरिइरहने एउटा सामन्य राजनीतिक रूढोक्तिजस्तो मात्रै लाग्थ्यो भने पनि...
ओली–नेतृत्वमा चुनावमा जानै सकिन्न
शेखर कोइराला जेष्ठ ३०, २०७८
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नु केही महिनाअघि दिनुभएको एउटा अन्तर्वार्ता अहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भैरहेको छ । तत्कालीन सरकार सत्ता कब्जा गर्ने बाटामा लागेको...
कसैलाई किन चाहियो चुरे !
कृष्णप्रसाद पौडेल जेष्ठ ३०, २०७८
बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्रीले चुरेमाथि विकासे आक्रमणको घोषणा गरेका छन् । यसको विरोध गर्ने विपक्षीले उपयुक्त विकल्पको प्रस्तावबिनै आफ्नो धर्म निर्वाह गरेका छन् । हुन त यो कुनै...
घृणास्पद अभिव्यक्तिको अनर्थ
सम्पादकीय जेष्ठ ३०, २०७८
वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्ष्य गरेर शुक्रबार प्रदेशसभामा ज्यादै असंवेदनशील तथा घोर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए । आफू नाथुराम गोड्से बन्न...
आहुति जेष्ठ २९, २०७८
संविधानको व्यवस्थालाई रातारात लत्याएर राष्ट्रपतिले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि ओलीले आफ्नो योजनामुताबिक पुनः संसद् विघटन गरे । त्यसपछि नेपालको संसद्वादी राजनीति अन्योलग्रस्त हुन पुगेको...
चुरेले के दिन्छ ? संरक्षण किन गर्ने ?
लक्ष्मण न्यौपाने जेष्ठ २९, २०७८
चुरे पर्वत श्रृंखलालाई शिवालिक पनि भनिन्छ । यो श्रृंखला नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म करिब ३६ जिल्लामा फैलिएको भौगोलिक परिवेश हो । अझै हिमाल र तराईको सेतुका रुपमा अवस्थित...
अपडेटः बुधबार, २६ जेठ, २०७८ । १८ :४८ बजे